UXiaomi uqinisekisa ngokusesikweni ukufika kwakhe eSpain | Iindaba zeGajethi
Kwezi veki zidlulileyo, inani elikhulu lamahemuhemu lalatha kwinto yokuba isigebenga saseTshayina uXiaomi angaba sele eza kuvula ivenkile yakhe yokuqala elizweni, kodwa khange iqinisekiswe ngumenzi waseTshayina. Okokugqibela, uXiaomi ubhengeze ngokusesikweni ngeakhawunti yakhe ye-Twitter ngeSpanish isiqinisekiso esilindelwe ngabasebenzisi abaninzi, kuba ngale ndlela Zonke iimveliso esizithengayo ngokuthe ngqo ziya kuhlawulwa yiminyaka emibini yaseYurophu iwaranti, enye inkuthazo ngakumbi ukuba uphawu luqhubeke nokukhula eSpain, apho kungoku nje kungumenzi wesine othengisa ezona zixhobo zinkulu kumhlaba waseSpain.
Molo eSpain! Cinga ukuba ngubani oza ...? pic.twitter.com/oKZIVcPjki
-I-Spain yam (@Espana_Xiaomi) Oktobha 23, 2017
Ivenkile yokuqala ayizukubonelela ngazo zonke iimveliso uXiaomi anazo ngoku kwintengiso, ngakumbi ukuba sithetha ngee-smartphones. Kude kube ngoku, ekuphela kwendlela yokuthenga ii-Xiaomi ii-smartphones kungamaphepha ewebhu athi, ukuba ayengamaSpanish, abonelele ngesiqinisekiso kodwa ngexabiso eliphezulu kunoko sinokukufumana kumaphepha ewebhu aseAsia, apho kucacile ukuba besinokuthi ndlela-ntle kwisiqinisekiso ukuba besinengxaki nesiphelo.
Ivenkile yokuqala ebonakalayo eya kubakho eMadrid, Okwangoku asazi ukuba izokuvula nini iingcango zayo Into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba amaxabiso ezixhobo ozithengisayo awazukufana nalawo esinokuwafumana ngoku kwi-Intanethi kwiiwebhusayithi zaseAsia, kodwa kusoloko kuyacetyiswa ukuba uhlawule kancinci, ukuze ube nakho ukonwabela Isiqinisekiso kwilizwe lethu phambi kwayo nayiphi na ingxaki esinokuba nayo isixhobo sethu.
Ikhathalogu kaXiaomi inkulu kakhulu kwaye ayenziwanga ii-smartphones okanye iipilisi kuphela. UXiaomi ubeka kuthi ikhathalogu ebanzi yovavanyo lweesongo, iibhokisi ezisetiweyo eziphezulu, izikali ezikrelekrele, izikeyiti zombane, iikhamera zentshukumo, iikhamera ze-IP, iidrones, iitelevishini ezikrelekrele ... Uluhlu lweekhathalogu luyafumaneka kwilizwe lethu kwivenkile yokuqala esemthethweni yenkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » UXiaomi uqinisekisa ngokusesikweni ukufika kwakhe eSpain
I-Samsung Galaxy S9 inokuphinda ibe nomfundi wayo weminwe ngaphambili
IHuawei isebenza kwi-smartphone eguquguqukayo